Hotel(ဟိုတယ်)က ရလိုက်တဲ့ တရား… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Short Story » Hotel(ဟိုတယ်)က ရလိုက်တဲ့ တရား…
Hotel(ဟိုတယ်)က ရလိုက်တဲ့ တရား…
Posted by johnnydeer on Feb 13, 2013 in Short Story | 24 comments
ဟိုတယ်တစ်ခုမှာဖြစ်လိုက်ပြီဆိုလို့ကတော့ တကယ့်ကိုထင်မထားတဲ့ပြသနာတွေချည်းပါပဲ…ပြောပြဦးမယ်…တရက်ကပေါ့..နေ့လည် ၁၁ နာရီလောက် အပြင်က ဖုန်းတကော ရီဆက်ရှင်ကောင်တာကို ၀င်လာတယ်…အမျိုးသမီးသံနဲ့ပါ…ညီမလေးရေတဲ့..အမတို့ ပြန်မရောက်နိုင်သေးလို့ အမတို့အခန်း ၂၁၀ ကို CHECK OUT လုပ်ထားပေးပါနော် ဆိုတော့ ဟိုတယ်က၀န်ထမ်းတွေကလဲ အခန်းသေသေချာချာ သိမ်းဆည်းပေးပြီး CHECK OUT လုပ်ထားပေးလိုက်တယ်…အိတ်တွေကိုလဲ ကောင်တာရှေ့မှာပဲ သေသေချာချာ ချထားပေးထားတယ်…တချို့ ဧည့်သည်တွေကလဲ ၁၂ နာရီကျော်သွားရင် နောက်တရက်စာ ပေးရမှာစိုးလို့ အလုပ်ကိစ္စမပြတ်သေးရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်..ခရီးနည်းနည်းလွန်နေရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်..ဒီလိုပဲ ဖုန်းနဲ့လှမ်းပြီး လုပ်ခိုင်းလေ့ ရှိတော့ ဒီလိုပဲ သဘောထားပြီး လုပ်ပေးထားလိုက်ကြတယ်တဲ့…ဇာတ်လမ်းစတာက ၁၁နာရီခွဲလောက်ကျတော့ အဲ့ဒီအခန်းက ဧည့်သည်တွေ ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ ဘာလို့ ငါတို့အိတ်တွေကို အပြင်ထုတ်ထားတာလဲ…မင်းတို့ကို ဘယ်သူ CHECK OUT လုပ်ခိုင်းလို့လဲ ဆိုပြီး ရီဆက်ရှင်ဝန်ထမ်းတွေကို ဒေါသတကြီး အော်ဟစ်ပြောဆိုပါတော့တယ်..၀န်ထမ်းတွေက.သေသေချာချာ ရှင်းပြရှာပါတယ်…အပြင်ကနေ အမကဖုန်းဆက်ပြီး CHECK OUT လုပ်ခိုင်းလို့ လုပ်ထားပေးရကြောင်း…ပစ္စည်းတွေကိုလဲ သေသေချာချာ သိမ်းဆည်းပေးထားကြောင်း…ပစ္စည်းတွေကိုလဲ စစ်ဆေးကြည့် နိုင်ကြောင်း…တကယ့်ကို ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ရှင်းပြကြရှာပါတယ်…ဘယ်လိုမှ မရပါဘူး…တကယ့်ကို အော်ကြီးဟစ်ကျယ်နဲ့ တဟိုတယ်လုံးကြားရလောက်အောင်ကို အော်ဟစ်ပြီး သူတို့အိတ်တွေကို အခန်းထဲက ဆွဲထုတ်ထားတာ လုံးဝမကျေနပ်နိုင်တဲ့ အကြောင်း…ရဲစခန်းသွားပြီး တရားစွဲမည်ဆိုကြောင်း…သူ့မှာလဲ ၀န်ထမ်းတွေအများကြီးရှိကြောင်း…ဒီလို ၀န်ထမ်းတွေကို တခါထဲအလုပ်ထုတ်သင့်ကြောင်း…ဒေါသတကြီး အော်ဟစ် ဆဲဆိုပါတော့တယ်…ကျန်တဲ့ ဟိုတယ် ဧည့်သည်တွေကလဲ ဘာဖြစ်တာလဲ ဆိုပြီး ထွက်ကြည့်ကြတာ ကောင်တာရှေ့မှာလဲ လူတွေတော်တော်များလာပါတယ်…ကျွန်တော်ကလဲ အပြင်သွားနေတာ အဲံဒီအချိန်မှ ပြန်ရောက်ပါတယ်….ဧည့်သည်က ဒေါသတကြီး အော်ဟစ်နေပြိး ရီဆက်ရှင် ကောင်မလေးတွေက ငိုနေကြပြီ….ဖြစ်ပျက်ပုံ အလုံးစုံကိုလဲ ကျွန်တော်က ဘာမှန်းမသိ..အဲ့ဒါနဲ့.ဘယ်လိုဖြစ်ကြတာလဲ မသိဘူးဆိုပြီး မေးလိုက်တော့ကျွန်တော့်ကို ဒေါသတကြီး ပြောပါတယ်.. သူတို့အိတ်တွေကို အပြင်ဆွဲထုတ်ထားကြောင်း…သူတို့ အခန်းထဲကိုသူတို့ခွင့်ပြုချက်မရပဲဝင်တဲ့အတွက် တရားစွဲလို့တောင် ရကြောင်း…ဒီဝန်ထမ်းတွေကို ချက်ချင်း အရေးယူပေးရန်ဆိုကြောင်း ဒေါသတကြီး ပြောဆိုပါတယ်…ပစ္စည်းတွေကော စစ်ပြီးပြီလားခင်ဗျ..ဆိုတော့ စစ်ပြီးကြောင်း…ပြည့်စုံလားခင်ဗျ..ဆိုတော့ ပြည့်စုံကြောင်းပြောတော့…ကျွန်တော် ၀န်ထမ်းတွေကိုလဲ မေးကြည့်ပါဦးမယ်…ကဲ..နင်တို့ဘက်က ပြောဦး..ဘယ်လိုဖြစ်တာတုန်း ဆိုပြီး သူ့ရှေ့မှာပဲ ၀န်ထမ်းတွေကို မေးလိုက်တော့ သူတို့ကလဲ ငိုပြီး ဒီအပြင်က ဖုန်းဝင်လာတာကစပြီး အခု နောက်ဆုံးအခြေအနေထိ ခရေစေ့တွင်းကျ ပြောပြကြတယ်…ဒါလဲ ပြောမရပါဘူး…ဘယ်လိုမှ မကျေနပ်နိုင်ဘူးတဲ့…ကဲ..တတ်နိုင်ပါဘူးလေ…တောင်းပန်ယုံပေါ့လို့ စိတ်ထဲမှာတွေးပြီး တောင်းပန်ရတော့တာပဲ…ကျွန်တော်.တောင်းပန်ကာမှ ပိုပိုတောင်ဆိုးလာသလားတောင်အောက်မေ့ရတယ်…တကယ် စိတ်ဓာတ်တောင်ကျသွားတယ်…ဒီအပြင်က၀င်လာတဲ့ ဖုန်းက ဘယ်ကဖုန်းလဲ…နောက်တဲ့ ဖုန်းလား…ဒါမှမဟုတ် ဟိုတယ်ပဲ မှားဆက်တဲ့ ဖုန်းလား…အခန်းမှားဆက်တဲ့ ဖုန်းလား အခုထက်ထိလဲ စဉ်းစားလို့မရသေးဘူး…ဒီဧည့်သည်ဆိုလဲ ဒါဟာမတော်တဆ အမှားမှန်းလဲ သိတယ်…သူ့အတွက်ဘာမှလဲ ပျောက်ပျက်ပြီး နစ်နာဆုံးရှုံးတာမရှိဘူး….ဒီလောက်လဲတောင်းပန်နေတယ်…ဒီလောက်ကြီးတော့ မပြောသင့်ဘူး ထင်တာပဲ…ဒီ ရီဆက်ရှင် ၀န်ထမ်းကောင်မလေးတွေဆို အသက်အရွယ်အရ တွက်ကြည့်ရင် ဘာပဲပြောပြော သူ့မြေးလေးတွေလောက်ပဲ ရှိမယ်ထင်တယ်…ပြန်တွေးမိသေးတယ်….စိတ်သဘောထား နူးညံ့တဲ့ သူဆိုလို့ကတော့ ….. အော်…အဲ့လိုဖြစ်သွားတာလား…ဖြစ်လဲဖြစ်တတ်တယ်…နောက် မဖြစ်စေနဲ့နော်..အလုပ်ကို.သေသေချာချာလုပ်နော်ဆိုပြီး ဒီလောက်နဲ့ ပြီးသွားမှာ…စိတ်သဘောထား ညံ့တဲ့သူကျတော့ မတော်တဆ အမှားမှန်း သိရက်သားနဲ့ ခွင့်လွှတ်စိတ်နဲ့မတွေးပဲ ငါ သာနေ တုန်း တွယ်လိုက်ဦးမဟဲ့…ငါနိုင်နေတုန်းထောင်းလိုက်ဦးမဟဲ့…တောင်းပန်နေတုန်း ဆဲလိုက်ဦးမဟဲ့နဲ့ ဇွတ်ကိုထောင်လွှား မောက်မာ ရိုင်းစိုင်းနေတော့တာပဲ…နောက်ဆုံးတော့လဲ ဘယ်အရာမဆိုလူတစ်ဦးချင်းရဲ့ မူလ စိတ်ရင်းနဲ့ပဲ အဓိက သက်ဆိုင်တယ်လို့ ယူဆလိုက်ရတော့တာပါပဲ…ဒါကြောင့် မဟာဂန္ဒာရုံကျောင်း ရဲ့ အချက် ဆယ်ချက်မှာ စိတ်ကောင်းရှိဖို့သည် ပထမ ဆိုပြီး နံပတ် ၁နေရာထား ထားတာကိုးလို့ သဘောပေါက်လိုက်တော့တယ်…ကောင်းစေချင်လဲ ဒီစိတ်…ဆိုးစေချင်လဲ ဒီစိတ် ပဲမို့လို့ မြတ်စွာဘုရားက….. စိတ္တေန နိယတေ လောကော…စိတ်သည် လောကကို ဖန်ဆင်းတည်ဆောက်သည် လို့ ဟောကြားခဲတာကိုး…ဟိုတယ်ကနေ ရလိုက်တဲ့ တရားပေါ့…တကယ့် ကြုံလေ ဘုံဗွေပါပဲ….
အဲဒါ.. ဒီမှာပဲ တခါထဲအကူအညီတောင်းလိုက်တေ့ာမယ်..။
ကျုပ်တို့မိသားစုရယ်.. ဘေးအခန်းငှားထားတဲ့..ကျုပ်အမမိသားစုရယ်.. အချိန်မှီပြန်မရောက်နိုင်လို့. တည်းနေတဲ့.. အခန်း၂၁၀ နဲ့ ၂၁၁ ကို CHECK OUT လုပ်ထားပေးပါနော် ..
အော်.. ရီဆက်ရှင်ကကလေးတွေလည်း.. မုန့်ဖိုးပေးပါမယ်လို့နော.. ကျေးဇူး..
ဟူး …ထင်သလောက် မဆိုးလို့ တော်ပါသေးရဲ့။ စဖတ်ဖတ်ချင်း.. ဧည့်သည် ပစ္စည်းတွေကို ဟိုတယ်က သိမ်းပေးလိုက်တာ အရေးကြီး လက်ဝတ်လက်စားတွေ ပျောက်တယ်ဆိုပြီးများ အမှုအခင်း ဖြစ်တော့ မလားလို့။
ဟိုတယ်က အဲဒီလို ကိုယ်တိုင်မသိမ်းဘဲ ချက်အောက် လုပ်ခွင့်ပေးတာကိုက မဟုတ်တာ။ ချက်အောက် အချိန်မှီပြန်ရောက်အောင် လာသိမ်းချင်သိမ်း ၊ မမှီရင် Late check-out တစ်နာရီပိုပေးလိုက်၊ ဒါ့ထက်လွန်ရင်တော့ နောက်တစ်ရက်စာပဲ။ နှစ်ဘက်စလုံးအတွက် မျှတပါတယ်။ ဧည့်သည်ပစ္စည်းကို အခန်းသန့်ရှင်းအတွက်က လွဲရင် ထုပ်ပိုးသိမ်းဆည်းပေးရလောက်တဲ့ အထိလုပ်ပေးတာ မကြောက်ဘူးလား။ အဲဒီလို ဖုန်းနဲ့ ချက်အောက်လူတွေကလည်း ကိုယ့်ပစ္စည်းတွေ ကို သူများကို လက်လွတ်စပယ် သိမ်းခိုင်းတာ မစိုးရိမ်ကြဘူးလား။
ကျမအထင်ကတော့ အဲဒီဧည့်သည်ဘယ်လောက်ဟော်ဟစ်နေနေ သူမမှားပါဘူး။ မူလစိတ်ရင်း ကောင်းမကောင်းထက် ကိုယ့်ပစ္စည်းကို ခွင့်မပေးဘဲထိတာကိုင်တာ မကြိုက်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်။ သူစိမ်းမပြောနဲ့ ၊ မိသားစုထဲကလူချင်း ကိုင်တာရွှေ့တာတောင်ကြိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ အကုန်သိမ်းဆည်း ကန်ထုတ်လိုက်သလိုဖြစ်နေတော့ ပိုဆိုးတာပေါ့။
ဒီကိစ္စမှာ ရီဆက်ရှင် ၀န်ထမ်းတွေသေချာ မစိစစ်တာ အဓိကအမှားလို့ထင်တာပဲ။ အနည်းဆုံး အခန်းနံပတ်နဲ့ ဧည့်သည်နာမည်နဲ့ ဖုန်းခေါ်တဲ့သူ နာမည်နဲ့ တွဲမေးပြီး ချက်လိုက်သင့်တာ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူများစိတ်သဘောထားကို ဝေဖန်မယ့်အစား ဒီ check-out စနစ်ကို ပြောင်းသင့်ပြီ။
အဲဒါကြောင့် သဂျီးပြောသလို လုပ်ငန်းခွင်အတွေ့အကြုံလေးတွေ ဖတ်ချင်တာ။
ဒီလိုမျိုး Check-out လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာ သိတောင် မသိဘူး။
ချိုချိုကြွပ်ကြွပ် (သကြားလုံးကြော်ဆိုတော့) ပြောသလို Check-out စနစ်ကို ပြောင်းသင့်တယ်။
ဟိုတယ်ဘက်က ၀န်ဆောင်မှုပေးရာမှာ ဧည့်သည်ပစ္စည်း သိမ်းပေးရတာ တာဝန်ကြီးလွန်းတာမို့ မလုပ်ပေးသင့်ဘူး ထင်တယ်။
ကျွန်မတို့ခရီးသွားရင် ဟိုတယ်မှာတည်းပြီး မနက်ပိုင်းလျှောက်လည် ညနေပိုင်းကားနဲ့ပြန်တာမျိုးဖြစ်တတ်တယ် .. အဲဒါဆိုရင် မနက်ကထဲက တစ်ခါထဲ checkout လုပ်တာပဲ … ပြီးရင် အထုတ်အပိုးအားလုံး ကောင်တာမှာအပ်ခဲ့ပြီး ညနေကားဂိတ်ဆင်းခါနီးမှ သွားယူလေ့ရှိတယ် … ဟိုတယ်လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံတွေကို အားပေးနေပါတယ် …
ခရီးထွက်ရင်တော့ ဘယ်အချိန် ပြန်ရမယ် ဆိုတာ တွက်ပြီးသားမို့.. ညနေမှ ပြန်မယ် ဆိုလည်း မနက်မထွက်ခင် အထုတ်တွေ သိမ်းပြီး တခါတည်း အခန်းအပ်ပြီး အထုတ်တွေကိုတော့ ဟိုတယ်မှာ အပ်ထားလိုက်တယ်..အနားပတ်ဝန်းကျင် လျှောက်လည်ပြီး ပြန်ချိန်ရောက်မှ ဟိုတယ်က အထုတ်တွေ သွားထုတ်ပြီး ပြန်လိုက်တော့တာပဲ.. တခါမှ အဲ့လိုမျိုး မဖြစ်ဘူးဘူး..
မနက်ပိုင်း ဟိုတယ်မှာ အထုတ်တွေ အပ်ထားပြီး ဈေးလျှောက်ပတ်တယ်.. ဈေးလျှောက်ပတ်တာ ကင်မရာ မလိုပါဘူးလေ ဆိုပြီး အထုတ် သိမ်းပြီးမှ ဆိုတော့.. အပြင် အိတ်မှာပဲ ကင်မရာ ထည့်ထားလိုက်မိတယ်။
ပြန်ချိန်ရောက်တော့ အထုတ်ယူပြီး အတွင်းလည်း မထည့်လိုက်မိတော့ဘူး။
ဖြစ်ချင်တော့.. မြန်မာလေဆိပ် က ကင်မရာ ကို အပေါ်လေးတင် လွယ်လွယ် ယူလို့ ရနိုင်တဲ့ နေရာ ဆိုတာ X-ray နဲ့ တွေ့သွားလို့.. တခါတည်း ဆွဲပြီး ဖွင့်ယူသွားတယ်.. ဇစ်လေးတောင် သေချာ ပြန်မပိတ်ပေးသွားဘူး။
အနိစ္စ အနိစ္စ.. အန်ကောဝပ် မှ အလှရိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေ ပါသွားတယ်။ ဘ၀ အတွက် မှတ်တမ်းကလေး တခု သခိုး အခိုး ခံ လိုက် ရတာပေါ့။
အဲ့ဒီ ခရီးစဉ်က ပင်ပန်းတယ်.. နောက်တခေါက်လည်း မသွားချင်ဘူး။
ဒီကိစ္စမှာတော့ ဟိုတယ် ရီဆက်ရှင်က ကလေးမလေးတွေဘက်က နဲနဲလိုသွားတယ်လို့ ကောက်ချက်ချမိတယ်ဗျ
လုပ်မယ့်လူရဲ့ နာမည် နဲ့ဖုန်းနံပါတ် မရရင် ၊ လက်မခံသင့် မလုပ်သင့်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်
အားလုံးကို နည်းနည်းလေး ထပ်ရှင်းပြပါရစေ…ဧည့်သည်က တမြို့နဲ့တမြို့ လာတဲ့ ပုံစံချင်း မတူတဲ့ အခါကျတော့ ကျွန်တော်တို့ မြို့ကို လာတဲ့ ဧည့်သည်တွေရဲ့ ပုံစံ…အခက်အခဲ..ဟိုတယ်ဘက်က အခက်အခဲ…ထပ်ပြောပြပါမယ်..ကျွန်တော်တို့မြို့ကို လာတဲ့သူအများစုက အလုပ်ကိစ္စထက် လာလည်တာများပါတယ်…ညအိပ်တဲ့သူကလဲ မန်းလေးထက်စာရင် ရန်ကုန်က ပိုများပါတယ်…ရန်ကုန်ကားတွေက ညနေ ၅ နာရီလောက်မှ ထွက်တဲ့အခါကျတော့ CHECK OUT 12း00 နဲ့ ကျတော့ ၅ နာရီလောက် ကြားထဲ ဟ နေပါတယ်…အဲ့ဒီ ၅ နာရီလောက်မှ Late CHECK OUT ပေးဖို့ရာကျတော့လဲ ဟိုတယ်ဘက်မှာ ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေပါဘူး…နောက်တရက်စာ ပေးဖို့ရာကျတော့လဲ ဧည့်သည်ဘက်ကျတော့ များလွန်းပါတယ်…ဒါကြောင့် ပုံမှန်အတိုင်း ဆိုရင်တော့ Late CHECK OUT ကို ၂ နာရီအထိ ပေးလိုက်ပါတယ်…Freeပေါ့… ၂ နာရီကနေ ၄ နာရီအထိကိုတော့ အခန်းခ တ၀က်နှုန်းနဲ့ လုပ်ပေးပါတယ်…၄ နာရီနောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့ တစ်ရက်စာ ယူလိုက်ပါတယ်…ဒါပေမယ့် ဧည့်သည်တအားများတဲ့ အချိန်ဆိုရင်တော့ ၂ နာရီထိ Late CHECK OUT မပေးနိုင်ပါဘူး..ပေးလိုက်ရင် အခန်းရှင်းချိန်နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်စောင့်နေရတဲ့ ဧည့်သည်ကို အားနာတာနဲ့အခြေအနေပေါ် မူတည်ပြီး 12း00 ထိပဲ ရတယ်ဆိုပြီး အဆင်ပြေသလိုပဲ ချိန်ဆရတာပါပဲ….နောက်ပြီး မသိကြလို့တာ ခရီးလွန်နေလို့ ဖုန်းနဲ့လှမ်းပြီး CHECK OUT လုပ်တာကတော့ ခဏခဏ ကြုံတွေ့ရတယ်…အခု ဖြစ်သွားတဲ့ အချိန်ကလဲ ဧည့်တအားများတဲ့ အချိန်ဖြစ်နေလို့ပါ…၀င်မယ့်ဧည့်သည်တွေက ထိုင်စောင့်နေတဲ့အချိန် ဖုန်းဆက်ပြီး ဧည့်သည်က Check out လုပ်ခိုင်းတဲ့အချိန် တိုက်ဆိုင်သွားလို့ပါ…ဟိုတယ်ဘက်က မှားတယ်ဆိုရင်တောင် တမင်သက်သက် အမှားမဟုတ်တာ သိသိကြီးနဲ့ ပြောဆိုသွားတာကြောင့်ရေးဖြစ်တာပါ…နောက်မှ ဒီ EARLY check in …LATE check out အကြောင်း ထပ်ရေးဦးမယ်…မန့်သူအပေါင်းအားလုံးကိုလဲ ကျေးဇူးပါ…
ကျုပ်များ.. ခရီးထွက်ရင်.. ညပိုင်းကားမောင်းတာမို့.. . ချက်ခ်ကင်အချိန်က.. မနက် ၅နာရီတောင်ရှိသေး..
မနည်းထပြီးချက်အောက်လုပ်ရတယ်…။ မနက်စာကြွေးရင်.. လွတ်တာသေချာတာချည်းပဲ..။
အောက်ထပ်မှာ ဘာညာကွိကွတွေ.. ကစားနေရင်.. မနက် ၄-၅နာရီမှ အပေါ်တက်ကြတာ..
ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ ကျွန်မလဲ သူများ ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုင်ရင် မကြိုက်ပါဘူး …
ပျောက်တာ မပျောက်တာက တပိုင်းပေါ့…
ဧည့်သည်ဘက်က ဖုန်းနဲ့ ချက်အောက်ကတော့ ဟော်တယ်ကြီးတွေမှာတော့ လက်ခံလေ့မရှိပါဘူး…
အရမ်း အန္တရာယ်ကြီးပါတယ်… ဘာမှ မပျောက်သွားလို့ ကံကောင်းတာပါ… သူ့ပစ္စည်းက ဘယ်နေရာမှာပျောက်လာမှန်းမသိဘဲ အခုကျမှ မတွေ့လုိ့ ပြဿနာထပ်ရှာရင် ဘယ်လိုမှ ရှင်းလို့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး..
အကောင်းဆုံးကတော့ သူတို့မသွားခင်ကတည်းက late check-out မရတဲ့အကြောင်း၊ ရရင်တောင် official check-out အတိုင်း မထွက်ပေးရင် ဘယ်လိုပေးရတဲ့အကြောင်းတွေ သေချာရှင်းပြပြီး အထုတ်တွေကို တစ်ခါတည်းထုတ်ထားခိုင်းလိုက်ရင် အဆင်ပြေမှာပါ… မွန်မွန်တို့လည်း ဒီလိုပဲ.. စောရောက်လို့ early check-in မရရင် အထုတ်တွေကို reception မှာထားခဲ့ပြီး အပြင်ထွက်လည်ကြ၊ စားကြသောက်ကြ၊ late check-out လည်းမရ၊ ပြန်ဖို့အချိန်လည်းမရောက်သေးရင်လည်း ဒီလိုပဲ.. check-out ကြိုလုပ်ထား၊ အထုတ်တွေထားခဲ့ပြီး အပြင်ထွက်ကြတာပဲ…. ဧည့်သည်ပစ္စည်းဆိုတာ check-out လုပ်ပေးဖို့မပြောနဲ့.. housekeeping ၀င်ရင်တောင် ထိကောင်းတဲ့အရာ မဟုတ်ပါဘူး… ဒီလောက်နဲ့ပြီးသွားတာ တော်သေးတယ်ပြောရမယ်…
ကျမမြင်တာတော့ reception က ကလေးမတွေက ဧည့်သည်ကျပ်ချိန် check out လုပ်မယ်ကြားတာနဲ့ အခန်းကိစ္စ အဆင်ပြေမှာ တစ်ခုတည်း မြင်ပြီး မလုပ်ပေးသင့်တဲ့ အလုပ်ကို သေချာ မဆန်းစစ်ပဲ လုပ်မိကြတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။
အမှန်တော့ သူက နာမည်ပြောတာတောင် ပစ္စည်းသိမ်းတဲ့ အလုပ်မလုပ်ပေးသင့်ပါဘူး။
ရန်ကုန်က ဟိုတယ်တစ်ခုမှာ ကျမတို့ ဧည့်သည် တရုတ်မ တစ်ယောက်တည်းရင်း ဒေါ်လာ 500 အခန်းထဲထားခဲ့တာ ပျောက်သွားပါတယ်။
ဘယ်လိုမှ claim လုပ်လို့မရပါ။
တိုင်မယ်၊ဂျာနယ်ထဲ ထည့်မယ်ပြောလည်း ထီမထင်တော့ (ခရိုနီ တစ်ယောက်ပိုင်တဲ့ ဟိုတယ်ပါ)
လက်လျှော့ပြီး နောင် ဧည့်သည်လာရင် ပေးမတည်းတော့ပါဘူး။
နိုင်ငံခြားမှာ အသိတွေ group tour သွားရင် ရေ မွှေးပုလင်းဝယ်လာတာ ပျောက်ပါတယ်။
ရေမွှေးဝယ်တဲ့ ဘောက်ချာရှိတဲ့ အပြင် အတူခရီးသွားတဲ့ ကျမအကိုက မန်နေဂျာကို သတင်းစာထဲထည့်မယ် ပြောပေးတော့ သူတို့ စုံစမ်းပေးပါမယ်လို့ တောင်းပန်ပါတယ်။နောက်ရက်ကျတော့ Laundry basket ထဲမှာ ပြန်လာထည့်သွားလို့ ကျေအေးလိုက်ပါတယ်တဲ့။
ကုန်ပစ္စည်း အရောင်းအ၀ယ်တွေမှာလည်း ကုန်ထုတ် ငွေထုတ်တွေမှာ အားနာပြီး သေချာ မစိစစ်ပဲပေးရင် ကိုယ်ပဲ ဒုက္ခရောက်တတ်ပါတယ်။
ပြောချင်တာကတော့ ကျမတို့ မြန်မာပြည်မှာ duty & responsibility ကြားမှာ ခွဲခြားလို့ ကျင့်သားမရသေးတော့ ပြဿနာတွေ ဖြစ်နေရတာပါပဲ။
ဟိုတယ်လို အလုပ်မျိုးမှာတော့ အားမနာတမ်း တိတိကျကျ လုပ်သင့်ပါတယ်။
” ဒီ ဧည့်သည် ဆိုလဲ ဒါဟာ မတော်တဆ အမှားမှန်းလဲ သိတယ် ”
” အသက်အရွယ်အရ တွက်ကြည့်ရင် ဘာပဲပြောပြော သူ့မြေးလေးတွေလောက်ပဲ ”
ပုံစံကတော့ Receptionist ကလေးမ ပေါ့လျော့လို့ ဖြစ်တာပဲ ။
ဧည့်သည်ကို သေသေချာချာ တောင်းပန်ပြီး ၊
အခန်းခ မယူတာတို့ လုပ်သင့်တယ် ။
အဘ ကတော့ မတော်တဆ မှားလည်း လက်မခံဘူး ။
မရည်ရွယ်ပဲ မှားလဲ လက်မခံဘူး ။
ဘာကြောင့် မှားမှား ၊ မှားတဲ့သူကို ဆော်မှာပဲ ။
မြေး အရွယ်လဲ တစ်ဆုံး ဆွဲမှာပဲ ၊ အဖိုး အရွယ်လဲ တစ်ဆုံး ဆွဲမှာပဲ ။
မှားလို့ကတော့ ၊ မညှာနိုင်ပါဘူး ။
သင်္ဘောက လူတွေကိုလည်း ၊ ကြိုမှာထားပြီးသား ၊
ဘာကြောင့် မှားမှား ၊ မှားတာ လက်မခံနိုင်ဘူး လို့ ။
အမှားတွေ ၊ မတော်တဆ တွေ လုပ်ချင်ရင် ၊
တစ်လ ၃ / ၄ သောင်းလောက်ပဲ ရတဲ့ ၊
မြူနီစပယ် သန့်ရှင်းရေးသမား သွားလုပ်ကြလို့ ။
လူရိုသေ ရှင်ရိုသေ ဝင်ငွေကောင်းရတဲ့ အလုပ်တွေမှာ ၊
လာလုပ်မနေကြနှင့် လို့ ။
တခါတလေ စေတနာနဲ့မှားတတ်တဲ့အမှားမျိုးလည်းရှိတတ်တော့ 
ဟိုတယ် ချက်ကင် ချက်အောက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုရင်လည်း
သေချာဃဃနနမသိပါဘူး။ ကိုရင်တို့ ဟိုတယ်ခဏတည်းခိုရင်လဲ
ကမ်ပဏီစီစဉ်တဲ့ အတိုင်း ညအိပ်ဆိုလဲအိပ်နဲ့ ခဏနေဆိုလဲ နေ၊
လာခေါ်ရင်လိုက်သွားဆိုတော့ မသိပါဘူး… စကားမစပ်..
(သင်္ဘောက လူတွေကိုလည်း ၊ ကြိုမှာထားပြီးသား ၊
ဘာကြောင့် မှားမှား ၊ မှားတာ လက်မခံနိုင်ဘူး လို့ ။)
အဘက လှေသူကြီးဆိုတော့ ဒီနယ်ပယ်အရတော့ အဲ့စကားက အမှန်ပါပဲ..
Safety First ပါ… ကိုယ့်ရဲ့ ဘာကြောင့်မှားမှား၊ စေတနာအမှားဖြစ်ဖြစ်
ရေယာဉ်တစ်ခုလုံးရဲ့ သင်္ဘောသားတွေရဲ့ အသက်အတွက် အမှားတော့
မခံနိုင်ပါဘူး…။ အမှားဆိုတဲ့ စကားတစ်ခွန်းနဲ့တော့
” တခါတလေ စေတနာနဲ့မှားတတ်တဲ့အမှားမျိုးလည်းရှိတတ်တော့ 
အဲတာတွေလည်း ဆော်မှာပဲလား….အဘ ”
တစ်ချို့နေရာတွေမှာ ဘာကြောင့် မှားမှား ၊
မှားလို့မရတဲ့ အခြေအနေတွေ ရှိတယ်ကွယ့် ။
( ဥပမာ Chief officer က Stability တွက်တာ မှားရင် သင်္ဘောနစ်မှာပဲ )
မှားတဲ့ အချက်တိုင်းမှာ ၊ အပြစ် တစ်ခု မဟုတ် တစ်ခု ရှိနေတယ်ကွယ့် ။
ဒါကြောင့် ၊ အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် ၊ စေတနာနဲ့မှားရင်တောင် ၊
စေတနာကို အသိအမှတ်ပြုသော်ငြားလည်း ၊
အပြစ် တစ်ခု မဟုတ် တစ်ခု အတွက် ဆော်ရမှာပဲ ။
အဓိက ကတော့ မမှားချင်ရင် စံနစ်ကိုပါ ပြင်ရမှာပါ ။
ဥပမာ အားဖြင့် ။ Check ၊ Re-check ၊ Counter-check စံနစ်တွေ ။
သင်္ဘောမှာ ဘာအလုပ်ခိုင်းခိုင်း မခိုင်းခင်မှာ Risk Evaluation Form ဖြည့်ရတာတွေ ။
အဓိကက မမှားအောင် ၊ စံနစ်ကြီးကိုပါ စံနစ်တကျ ပြင်ရမှာပါ ။
ဒါကြောင့်လည်း ၊ စံနစ်ကောင်းပြီသား နိုင်ငံခြားသား Management အဖွဲ့ ( Accor ) ကို ၊
ဦးဇော်ဇော် က သူအသစ်ဖွင့်မယ့် ဟိုတယ်အတွက် ဈေးကြီးပေးပြီး ငှားဖို့လုပ်နေတာပေါ့ ။
‘D ကောမန့်တွေ အားလုံးကို ရီဆက်ရှင် ကောင်မလေးကို ဖတ်ခိုင်းလိုက်တော့မယ်…အလုပ်များ တခါထဲ ထွက်သွားမလားမသိဘူး…လူမျိုး တစ်ရာ့တစ်ပါးနဲ့ နေ့စဉ် ဆက်ဆံနေရတဲ့ အလုပ်မှာ တခါတလေတော့ မှားတတ်ကြမှာပဲလေ…ရန်သူတောင် တောင်းပန်ရင် ကျေအေးပေးကြတာပဲလေ…ခုလဲ သေသေချာချာ ရှင်းပြတယ်…ကျေကျေလည်လည် တောင်းပန်တယ်…ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုတောင်းပန်တောင်းပန် မကျေအေးပေးနိုင်ပါဘူး ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ဘာဆက်လုပ်ရမှာလဲ…ကောမန့်ပေးသူအပေါင်းလဲ ဘာဆက်လုပ်သင့်လဲ ဆိုတာလေးတော့ ၀ိုင်း အကြံဥာဏ်ပေးကြပါဦး…တခါတလေ လက်တွေ့ရင်ဆိုင်ရတာတွေဟာ တကယ် နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့တွေ့တဲ့အခါ သိပ်တော့မလွယ်လှပါဘူး…
အဲဒီကလေးမလေးကိုပြောနေကြတယ်လို့ဆိုတာထက်.. အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့အဖြစ်အပျက်အပေါ်… ကိုယ့်ဆိုင်ရာဆိုင်ရာအမြင်တွေနဲ့.. brainstorming လို့ယူဆစေချင်တာပါ..။
အဲဒီဧည်သည်ပြန်သွားပြီဆိုရင်တော့.. နောင်ဒီလိုမလုပ်အောင် စည်းကမ်းထုတ်..
နိုင်ငံတကာ မှာလည်း ၊ မှားတတ်တယ် ။
ဘယ်နေရာမှာမဆို ၊ မှားတတ်တယ် ။
အဓိက ကတော့ ၊ ကိုယ်က မှားပြီးရင် တာဝန်ယူမှု တစ်ခုခု ဆိုတာ ရှိရတယ် ။
ပါးစပ်လေးနှင့် သွားလေးဖြဲပြ ၊ ခါးလေးကိုင်းပြယုံ တောင်းပန်တာကို လက်မခံနိုင်ပါဘူး ။
အဘ သာ ဟိုတယ် ပိုင်ရှင်ဆိုရင် ၊ ဒီအခြေအနေကို သုံးသပ် လိုက်တာနှင့် ၊
သေချာတာ တစ်ခုကတော့ ၊ ဧည့်သည်ဟာ လူကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာ ချက်ချင်း သိသွားပြီ ။
( ဧည့်သည်က သူ့ ပစ္စည်းတွေ ပျောက်ပါတယ်လို့ လီဆည်ပြီး မစွတ်စွဲခဲ့ဘူး )
၁ ။ ဧည့်သည်ကို အုပ်ချုပ်မှုမှာ အကြီးဆုံးလူ ကိုယ်တိုင်က သေသေချာချာ တောင်းပန်ခိုင်းမယ် ။
၂ ။ ဧည့်သည် ရဲ့ အခန်းခ ကို မယူဘဲ / နစ်နာကြေး အနေနှင့် ပြန်အမ်းပေးလိုက်မယ် ။
၃ ။ အဲဒီ အခန်းခ ကို မှားခဲ့တဲ့ Receptionist ကလေးမ လစာထဲက ဖြတ်လိုက်မယ် ။
၄ ။ Receptionist ကလေးမ ကို နောက်ထပ် မ မှားဖို့ Warning ပေးလိုက်မယ် ။
Receptionist ကလေးမ မကျေနပ်ရင် မလုပ်နိုင်ရင် ထွက်ပေါ့ ၊
သနားစရာ နှမျောစရာ မရှိပါဘူး ။
လစာ ကောင်းကောင်းပေးနိုင်သရွေ့တော့ အလုပ်သမား မရှားပါဘူး ။
လူဆိုတာတော့ မှားတတ်ကြပေမယ့် မှားတယ်ဆိုတာတော့မကောင်းပါဘူး
ကိုယ့်ဖက်က ကာစတမ်မာကို တခုခုအမှားလုပ်မိရင် တောင်းပန်နေရုံနဲ့မပြီးဘဲ တခုခုပြန်လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်
လမ်းမှာ မတော်တဆစက်ချို့ယွင်းလို့ပျက်ခဲ့ရင် ခရီးသည်တွေရဲ့ အချိန်တွေ ငွေတွေ အစီအစဉ်တွေထိခိုက်ပါတယ် လူလည်းပိုပင်ပန်းပါတယ်
အစတည်းကသေချာကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီး မတော်လို့(တကယ့်ကိုမတော်တဆ)ပျက်ခဲ့ရင်လည်း ရီကာဗာရီလုပ်ပေးရပါမယ်
လေယာဉ်ပျံအင်ဂျင်နီယာတွေလေယာဉ်ပြင်တာ တခုခုမှားတာတို့၊ ပိုင်းလော့က တခုခုလွဲသွားလို့ လေယာဉ်ပျက်ကျသွားလို့လူကုန်သေရင် ဆောရီးလည်း အလကားပါပဲ
(ချာတူးပြောသလို) ပတ်တီးနဲ့ဆေးယူပီး ထပ်ပွားအုံးမယ်
မြန်မာတွေက လူပဲမှားမှာပေ့ါဆိုပီး တော်ရုံဆိုလွယ်လွယ်ခွင့်လွှတ်တတ်ကြသလို (အကောင်းမြင်လို့လားမသိ)
အဲ့လိုကြောင့်လည်း လုပ်ငန်းတွေမှာ ခဏခဏမှားတဲ့လူတွေများနေသလားလို့
ဘယ်သူတွေဘာပြောပြော ပေးကလန်ရဲ့ဂျာကြီးက ပေးကလန်ကိုပြောထားပါတယ်
ပေးကလန်ရဲ့အဖွဲ့ထဲမှာ ပေးကလန်ဖြစ်ဖြစ် တခြားမန်ဘာဖြစ်ဖြစ် ပလိုဂလမ်မှာ အမှား၅%အထက်ဆိုရင် ပေးကလန်အတွက် နက်ဂတစ်တဲ့
Air line တွေမှာတော့ လေကြောင်းလိုင်းဘက်က အမှားကြောင့် ခရီးစဉ် delay ဖြစ်ရရင် refund သဘောမျိုးပြန်ပေးပါတယ်…
Kenya Airway က refund ယူအက်စ် ၁၀၀ ပြန်ရဘူးပါတယ်…
((မတော်တဆ မှားလည်း လက်မခံဘူး ။
မှားလို့ကတော့ ၊ မညှာနိုင်ပါဘူး ။))
အင်း…ဒီလိုသာ ဆိုလို့ကတော့ ခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတာတွေ သည်းခံခြင်းဆိုတာတွေ မြန်မာစာထဲကနေ ဆွဲဆုတ်ပစ်ရတော့မှာပေါ့…ဒီ အမှားဆိုတာရယ်..ခွင့်လွှတ်ခြင်း..သည်းခံခြင်း…အပြစ်ပေးအရေးယူခြင်းဆိုတာတွေရယ် နောက်မှ ထပ်ရေးပါဦးမယ်…
ဒီပိုစ့်ကို မန့်ချင်နေတာ ရက်ကျော်သွားလို့
အခု ပြန်ဆွဲထုတ်လာတာနဲ့ အတော်ပဲဖြစ်သွားတယ်…
အခုရေးထားတဲ့စာအရ အဲဒီဟိုတယ်ဟာ ပုဂံဒေသ မှာရှိမယ်လို့ထင်ရတယ်…
ကျုပ်တို့တိုင်းပြည်မှာ ဘယ်ဟာမှ စံနစ်မကျပါဘူး…
အဲ… ပိုဆိုးတာက လူတွေကလဲ စံနစ်ကျတာကို မကြိုက်ပါဘူး…
(အိုးရွဲ့ကို စလောင်းရွဲ့နဲ့ ဖုံးရပါတယ်)
ဆိုလိုတာက ငပလီကဟိုတယ်နဲ့ တောင်ကြီးကဟိုတယ်နဲ့ ပုဂံကဟိုတယ်နဲ့ ရန်ကုန်ကဟိုတယ်-
လုပ်ကိုင်ရပုံချင်း – လုံးဝ လုံးဝ မတူပါဘူး
အဲဒါကတော့ ဖြစ်လာရင် ကြည့်ရှင်းပေါ့…
မထူးလဲ ပြဿနာကတော့ ဖြစ်ချင်ရင်ဖြစ်စရာတွေအများကြီးရယ်…